LEHILAHY NANGAROM-PAOSY : Tratra tamin’ny alalan’ny fakan-tsary miafina fanaraha-maso
Lehilahy iray 32 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP 7 ny 01 jona 2019 lasa teo tao amin’ny tobim-piatsonana Andohatapenaka, noho ny resaka harom-paosy. 5 juin 2019
Mpiasa tao amin’io toerana io ihany ity lehilahy ity ary “Guichetier” no asany. Tokony ho tamin’ny 10 ora maraina dia nivory tao amin’ny birao izy sy ireo mpiara-miasa aminy ka rehefa vita ny fivoriana dia nisy ireo mpiara-miasa aminy niresaka teo ivelan’ny birao. Rehefa varian-dresaka teo ireo namany dia novahany moramora ny sakaosin’ny iray tamin’izy ireo ka lasany ny vola tao anatin’ilay kitapo.
Nametraka fitarainana tany amin’ny polisy anefa ity mpiasa iray very vola ity fa nisy nangalatra tao anaty kitapo ny volany. Natao ny fanadihadiana ka rehefa nojerena ny “ caméras de surveillance” na fakan-tsary miafina dia hita fa ity mpiara-miasa aminy ity ihany no naka ny volany tao anaty kitapony. Efa eo anatrehan’ny mpitandro filaminana ny fanohizana ny fanadihadiana ny raharaha ankehitriny.